ဘဝမှတ်တိုင်: ★★RAR for Android Version : 5.10.build14 Apk (All Android)★★
★★RAR for Android Version : 5.10.build14 Apk (All Android)★★
ဒီကောင်လေးကတော့မိမိဖုန်းမှာဒေါင်းလော့စ်ဆွဲထားတဲ့ RAR, ZIP, TAR, GZ, BZ2, XZ, 7z, ISO, ARJ archives အစရှိသည်တို့ကို unpack လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။အတွဲလိုက်ဒေါင်းရင်လည်းဒေါင်းဖိုင်တွေကိုအမှန်
ချစ်ပေးပြီးဖိုင်ဖြည်လို့ရပါတယ်။all-in-one, original, free, simple လေးဖြစ်ပြီးအသုံးပြုရလွယ်ကူပါတယ်။
ဒီကောင်လေးကိုတော့ Android : 4.0 နှင့်အထက်မှာသာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
If you wish to help us translating RAR to your language, please download RAR for Android language files in “RAR extras” section of Rarlab.com and follow instructions in readme.txt. Thank you.
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 4/29/2014 10:13:00 am